Angazi ngawe, kepha ngiyaqala ukubona okuningi okuningi izikhangiso ku-Youtube. Njengoba ividiyo iba ngexabiso eliphansi futhi inomthelela, kubonakala sengathi wonke amasu wokumaketha adinga ukuyifaka. Ividiyo ihluke kakhulu ngoba ifinyelela cishe wonke umuntu. Akuwona wonke umuntu ofundayo, kepha wonke umuntu uyabuka. Futhi nge-Youtube efakwe cishe kuwo wonke amapulatifomu axhunyiwe, ayikho indlela ongawabuki ngayo amavidiyo we-Youtube.
Abathengisi, i umthelela wezikhangiso kumavidiyo afanele iyaqhubeka nokukhuphuka… ngakho-ke akudingeki ukuthi uphume uyothola umdwebi wevidiyo okwamanje (yize bengingakuncoma lokho!). Kubukeka sengathi imboni yenze umsebenzi omuhle ekusebenziseni kancane kancane izikhangiso ezinde nezinde zevidiyo nezikhangiso ze-popover. Ngibuke isikhangiso seminithi emi-2 ngolunye usuku kuvidiyo eyodwa! Kaningi kunalokho, ngibuka ukubalwa phansi kwe- “Skip this Ad”, noma kunjalo.
Qiniseka ukuthi ulanda i-Youtube Traffic Report yakho kwiReel Marketing Insider.
Tags: ividiyo infographicukukhangisa kwevidiyoyoutubeizibalo ze-youtube
I-SERPs Yethula Inkomba Yokuguquguquka Kwenjini Yokucinga
Khulisa Ukubukwa Kwe-Youtube
Jan 12, 2013 ku-12: 56 AM
Ngiyabonga ngemininingwane yakho.Ngingathanda ukwabelana ngezinsizakalo zemidiya yokuxhumana nabantu ikakhulukazi i-youtube. Gcina umsebenzi omuhle kubhulogi.